राजनीति, संविधान र नागरिक दायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
प्रतिनिधिसभा विघटन न राजनीतिक हो, न संवैधानिक नै । यो त सत्ता र शक्तिको छलकारी खेल मात्र हो ।
माघ ३, २०७७ कृष्ण खनाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक मुद्दा भनेर त्यसमा अदालतको प्रवेशलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । अर्थात्, उनको कदमलाई अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको मानेर सदर गरिदिनुपर्छ ।
नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपमा सधैं सडकमा हुन्छन्, छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनका बेला मात्र होइन, त्यसपछि पनि नागरिक आन्दोलनहरू निरन्तर छन् । त्यो चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन होस् वा यौन हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना, सामाजिक वा जातीय विभेदका घटना नै किन नहोऊन् वा गुठी विधेयकजस्ता जनहितविपरीत सरकारी कदमको विरोध, सबै नागरिक आन्दोलनका रूप हुन् । समयअनुसार मुद्दा र प्रकृति फरक हुन्छन् । ती आन्दोलन सधैंभरि काठमाडौंको सिंहदरबार गेट, मण्डला वा वानेश्वरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो कञ्चनपुर, जुम्ला, पोखरा, जनकपुर, सिरहा कहीँ पनि हुन सक्छ । ठाउँ फरक हुँदैमा नागरिकका भावना, मुद्दा र मतको महत्त्व कम हुँदैन । तर के गर्ने, स्वायत्त र संघीय भने पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्र काठमाडौं नै छ । नागरिक बलको केन्द्र पनि काठमाडौं नै छ । त्यसैले त, सत्तारूढ नेकपामा रडाको चुलिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै गरेको बेलामा पनि तराई मधेसका उखु किसान ज्यानै फाल्ने गरी काठमाडौंको मण्डलामै आइपुगेका थिए । निकै दिनको सडक सङ्घर्षपछि केही राहतको आश्वासन बोकेर फर्केका छन् । राहत मिल्यो कि मिलेन, सायद अर्को आन्दोलनको अवस्थाले मात्र बताउनेछ ।
यसमा शंका छैन, अहिलेको नागरिक आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको हो । आन्दोलनरत पार्टीहरूका लागि जस्तो यो प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामा मात्र सीमित हुन सक्तैन । एउटा प्रश्न उठ्छ, जुन स्वाभाविक तर अत्यन्त गम्भीर छ । पुन:स्थापनापछि राजनीतिक दलहरू संसद्भित्र सत्ता–समीकरणको अदलबदलमा लाग्छन् । त्यसपछि नागरिक आन्दोलन के हुन्छ ? संसद्भित्रका फोहोरी लेनदेनले नागरिक हिजैदेखि वाक्कब्याक्क भैसकेका छन् । के नागरिक आन्दोलन पनि त्यसकै पुनरावृत्तिका लागि हो ? निश्चय पनि, नागरिक आन्दोलन त्यसका लागि होइन । म अहिले नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रम निर्णयकर्तामध्येमा छैन । तर यो कुरा ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ— नागरिक आन्दोलन सत्ताको फोहोरी खेल पुनरावृत्तिको पक्षमा पटक्कै छैन ।
यसका अगाडि अरू थप दुइटा जिम्मेवारी पनि सँगै छन् । पहिलो, संसद् पुन:स्थापना हुँदैमा यसको जिम्मेवारी सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक वैधतालाई पनि समाप्त गरेको छ । पुन:स्थापनाले त्यसलाई सच्याउने प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक हैसियत त कायम गर्नेसम्म मात्र हो तर राजनीतिक रूपमा यो सभा बेकम्मा हुन्छ । तसर्थ छिटो चुनाव अपरिहार्य छ । नागरिक आन्दोलनको ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ । अर्को, यदि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएन भने संविधानलाई ट्रयाकमा राख्ने काम चुनावबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा यो संविधानको अन्त्यको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, २०५९ असोजमा जस्तै । चुनाव अपरिहार्य हो, तर ओली सरकारलाई कायम राखेर चुनावमा जान सकिन्न । यो सरकारको वैधता पूरै सकिएको छ, अदालतको फैसलाबाट त्यो वैधता फर्किंदैन । सडकबाटै ओली सरकार फ्याँक्न आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ । यसपटक नागरिक अगुवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा पनि छ, स्वच्छ राजनीतिका लागि आन्दोलनपछिको दलीय मार्गचित्र र नेतृत्वको जनअपेक्षित अनुहारका लागि निरन्तरको खबरदारी र क्रियाशीलता ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७७ १८:२५
माघ ३, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
धनकुटा — गृहमन्त्री तथा नेकपा (ओली समूह) का सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई धनकुटामा कालो झण्डा देखाइएको छ ।
नेकपा धनकुटाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार सम्बोधनका लागि धनकुटा पुगेका थापालाई नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध विद्यार्थीले कालो झन्डा देखाएका हुन् । उनी कडा सुरक्षाका साथ कार्यक्रमस्थल त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालयतर्फ जाँदै गर्दा कालो झन्डा देखाइएको हो । उनीहरुले सरकार विरोधी नारासमेत लगाएका थिए ।
गृहमन्त्री थापा सेनाको हेलिकप्टरबाट गएका त्यहाँ पुगेका थिए ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७७ १८:०९